ရောငျပွနျဟပျတဲ့ “စတေနာ” - MM Daily Life
တဈခါက အဖှားအိုတဈဦးဟာ ဈေးထဲမှာ လိမ်မျောသီးဆိုငျလေးတဈဆိုငျ ဖှငျ့ထားပါတယျ. လူတဈယောကျကလညျး အမွဲလို အဖှားအိုဆိုငျကနေ လိမ်မျောသီးဝယျလရှေိ့သတဲ့..သူ့စိတျကွိုကျ လိမ်မျောသီးတှေ ရှေးပွီးတာနဲ့ ကီလိုခြိနျ ကသြငျ့ငှရှေငျးပွီးရငျ သူအမွဲလုပျနကြေ အပွုအမူတဈ ခုရှိသတဲ့။အဲဒါကတော့ လိမ်မျောသီးအားလုံး အိတျထဲထညျ့ပွီးတိုငျး လိမ်မျောသီးတဈလုံးကို အိတျထဲက ပွနျထုတျ အခှံခှာပွီး လိမ်မျောသီးတဈစိတျကို စားပါတယျ။
ပွီးရငျ “ဒီလိမ်မျောသီးက အရမျးခဉျြတာပဲ” လို့ ပွောပွီး ကနျြတဲ့တဈလုံးလုံးကို အဖှားအိုကို ပေးပါတယျ။အဖှားအိုကလညျး တဈစိတျစီ စားကွညျ့ရငျး “ဘာဖွဈလို့လဲ မခဉျြပါဘူး။ခြိုပါတယျ လူကလေးရဲ့” လို့ အမွဲပွနျပွောပွီး အဖှားအိုက အဲ့လိုပွောပွီးတိုငျး အဲဒီလူက သူ့လိမ်မျောသီးအိတျကို ကောကျဆှဲပွီး ပွုံးပွုံး ပွုံးပွုံးနဲ့ ပွနျသှားတာပါပဲ။အဲ့လို လိမ်မျောသီးလာဝယျတိုငျး လုပျနကေလြူဟာ တဈခါမှာ ဈေးကို သူ့ဇနီးပါ ပါလာပါတယျ။လိမ်မျောသီးဆိုငျမှာ ထုံးစံအတိုငျး သူ့ အပွုအမူကိုလုပျတော့ အပွနျမှာ သူ့ဇနီးက မေးတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီလူက သူ့ဇနီးကို ပွနျဖွသေတဲ့။
အဲဒီ အမအေိုဆိုငျက လိမ်မျောသီးတှကေ တကယျတော့ အမွဲခြိုပါတယျ။အမအေိုက လိမ်မျောသီးရောငျးနပေမေယျ့ သူ့လိမ်မျောသီးတှကေို အ မွတျမရမှာ စိုးတာကွောငျ့ ဘယျတော့မှ မစားခဲ့ဘူး။အမအေို အရမျးဆငျးရဲတာ ငါသိခဲ့လို့ အဲလိုနညျးနဲ့ လိမ်မျောသီးခြိုခြိုလေး သူစားနိုငျအောငျ ငါလုပျပေးတာပါ” တဲ့။အဲဒီလိုပဲ။အဖှားအိုရဲ့ ဘေးဆိုငျက စြေးသညျမိနျးမကလညျး အဲဒီလူကို မကနြေပျလို့ အဖှားအိုကို ပွောတယျ။ ရှငျ့ဆိုငျက လိမ်မျောသီးတှကေ ခြိုရဲ့သားနဲ့ အဲဒီလူက အမွဲခဉျြတယျလို့ ပွောတယျ။ဒါတောငျ ရှငျကအမွဲ အဆဈတောငျ ပိုထညျ့ပေးတယျနျောတဲ့။
အဲဒီတော့ အမအေိုက ပွုံးပွုံးလေးနဲ့..အဲဒီလူ ဒီလိုလုပျတာ ငါ့ကို လိမ်မျောသီး အလကားကြှေးခငျြလို့ လုပျနတောဆိုတာ ငါသိ‌နတေယျ.. တဲ့။ပွီးတော့ အဖှားအိုကပဲဆကျပွီး..ငါက အဆဈထညျ့ပေးတာ မဟုတျပါဘူး။ သူ့မတ်ေတာတရားက အလေးသာသာ သှားတာပါလို့ ပွနျပွော လိုကျပါသတဲ့။ဘဝရဲ့ပြျောရှငျမှုဆိုတာ အဲဒီလို သေးငယျတဲ့ ခဈြစရာ အပွုမူလေးတှကေနပေဲ လူသားအခငျြးခငျြး အသားအရောငျ ခှဲခွားမှုမရှိ ဘာသာရေး ခှဲခွားမှုမရှိ အဆငျ့အတနျး ခှဲခွားမှုတှမေရှိဘဲ တဈဦးပျေါတဈဦး စာနာ နားလညျမှုပေးကွရငျးနဲ့သာ စတငျကွရတာဖွဈပါတယျ။
မူရငျး – Credit
တစ်ခါက အဖွားအိုတစ်ဦးဟာ ဈေးထဲမှာ လိမ္မော်သီးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်. လူတစ်ယောက်ကလည်း အမြဲလို အဖွားအိုဆိုင်ကနေ လိမ္မော်သီးဝယ်လေ့ရှိသတဲ့..သူ့စိတ်ကြိုက် လိမ္မော်သီးတွေ ရွေးပြီးတာနဲ့ ကီလိုချိန် ကျသင့်ငွေရှင်းပြီးရင် သူအမြဲလုပ်နေကျ အပြုအမူတစ် ခုရှိသတဲ့။အဲဒါကတော့ လိမ္မော်သီးအားလုံး အိတ်ထဲထည့်ပြီးတိုင်း လိမ္မော်သီးတစ်လုံးကို အိတ်ထဲက ပြန်ထုတ် အခွံခွာပြီး လိမ္မော်သီးတစ်စိတ်ကို စားပါတယ်။
ပြီးရင် “ဒီလိမ္မော်သီးက အရမ်းချဉ်တာပဲ” လို့ ပြောပြီး ကျန်တဲ့တစ်လုံးလုံးကို အဖွားအိုကို ပေးပါတယ်။အဖွားအိုကလည်း တစ်စိတ်စီ စားကြည့်ရင်း “ဘာဖြစ်လို့လဲ မချဉ်ပါဘူး။ချိုပါတယ် လူကလေးရဲ့” လို့ အမြဲပြန်ပြောပြီး အဖွားအိုက အဲ့လိုပြောပြီးတိုင်း အဲဒီလူက သူ့လိမ္မော်သီးအိတ်ကို ကောက်ဆွဲပြီး ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြန်သွားတာပါပဲ။အဲ့လို လိမ္မော်သီးလာဝယ်တိုင်း လုပ်နေကျလူဟာ တစ်ခါမှာ ဈေးကို သူ့ဇနီးပါ ပါလာပါတယ်။လိမ္မော်သီးဆိုင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ အပြုအမူကိုလုပ်တော့ အပြန်မှာ သူ့ဇနီးက မေးတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီလူက သူ့ဇနီးကို ပြန်ဖြေသတဲ့။
အဲဒီ အမေအိုဆိုင်က လိမ္မော်သီးတွေက တကယ်တော့ အမြဲချိုပါတယ်။အမေအိုက လိမ္မော်သီးရောင်းနေပေမယ့် သူ့လိမ္မော်သီးတွေကို အ မြတ်မရမှာ စိုးတာကြောင့် ဘယ်တော့မှ မစားခဲ့ဘူး။အမေအို အရမ်းဆင်းရဲတာ ငါသိခဲ့လို့ အဲလိုနည်းနဲ့ လိမ္မော်သီးချိုချိုလေး သူစားနိုင်အောင် ငါလုပ်ပေးတာပါ” တဲ့။အဲဒီလိုပဲ။အဖွားအိုရဲ့ ဘေးဆိုင်က ဈေးသည်မိန်းမကလည်း အဲဒီလူကို မကျေနပ်လို့ အဖွားအိုကို ပြောတယ်။ ရှင့်ဆိုင်က လိမ္မော်သီးတွေက ချိုရဲ့သားနဲ့ အဲဒီလူက အမြဲချဉ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ဒါတောင် ရှင်ကအမြဲ အဆစ်တောင် ပိုထည့်ပေးတယ်နော်တဲ့။
အဲဒီတော့ အမေအိုက ပြုံးပြုံးလေးနဲ့..အဲဒီလူ ဒီလိုလုပ်တာ ငါ့ကို လိမ္မော်သီး အလကားကျွေးချင်လို့ လုပ်နေတာဆိုတာ ငါသိ‌နေတယ်.. တဲ့။ပြီးတော့ အဖွားအိုကပဲဆက်ပြီး..ငါက အဆစ်ထည့်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့မေတ္တာတရားက အလေးသာသာ သွားတာပါလို့ ပြန်ပြော လိုက်ပါသတဲ့။ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အဲဒီလို သေးငယ်တဲ့ ချစ်စရာ အပြုမူလေးတွေကနေပဲ လူသားအချင်းချင်း အသားအရောင် ခွဲခြားမှုမရှိ ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုမရှိ အဆင့်အတန်း ခွဲခြားမှုတွေမရှိဘဲ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး စာနာ နားလည်မှုပေးကြရင်းနဲ့သာ စတင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း – Credit